के साचिनै नेपाली कामदारको लागि सिङगापुरको ढोका खुलेकै हो त ? वास्तविक यस्तो हेर्नुुस। – PanchKhal Online
Home/समाचार/के साचिनै नेपाली कामदारको लागि सिङगापुरको ढोका खुलेकै हो त ? वास्तविक यस्तो हेर्नुुस।
काठमाडौ । अबदेखि बैदेशिक रोजगारीको लागि संस्थागत रुपमै म्यानपावरबाट सिंगापुर जान पाइने भएको छ । कन्टिनेन्टल ह्युमन रिसोर्स प्रालिले सिंगापुरको लागि नेपाली कामदारको माग ल्याएपछि संस्थागत रुपमा नै श्रम स्वीकृति लिएर सिंगापुर जान पाइने बाटो खुलेको हो ।
सिंगापुरको रिक्रुटमेन्ट एजेन्सी एसजी एच आर सर्भिस मार्फत नेपाली कामदार पठाउन लागेको कन्टिनेन्टलका संचालक दिनेश कुमार डंगोलले जानकारी दिए । हाउसकिपिङ र सहायक म्यानेजर पदका लागि दुईसय नेपालीको माग थाइल्याण्डमा रहेको नेपाली दुतावास मार्फत प्रमाणीकरण गरि ल्याएको उनले बताए ।२ सय जनाको कोटा ल्याएपनि पहिलो चरणका लागि भन्दै १ सय जनाको लागि पुर्व स्वीकृति दिइएको श्रम कार्यालय ताहाचलका निर्देशक सुरेश जोशीले जानकारी दिए ।
म्यानपावर कम्पनीले सिंगापुर जाने श्रमिकले २ हजार ३ सय सिंगापुर डलर ९एक लाख ८६ हजार रुपैयाँ० तलब पाउने गरी करिब तीन महिना अगाडी श्रम कार्यालयमा फाइल पेश गरेको थियो ।तर सेवाशुल्क लगायतका विषय टुंगो लगाउँदा ढिला ढिलो भएको उनले बताए ।
श्रम रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले सिंगापुर जाने श्रमिकसँग अधिकतम ५० हजार रुपैयाँ सेवाशुल्क लिन पाउने निर्णय गरेको छ। सिंगापुरबाट नेपाली कामदारको माग आएपछि श्रम कार्यालयले सेवा शुःल्क निर्धारण गर्न श्रम मन्त्रालयमा पत्र पठाएको थियो । सो पश्च्यात श्रम मन्त्रालयले बढीमा ५० हजार रुपैयाँ लिन पाउने निर्णय गरेको हो।
म्यानपावर कम्पनीले सिंगापुरसंगै ब्रुनाई, कम्बोडिया लगायतका देशको डिमाण्ड स्वीकृतिका लागि श्रम कार्यालय पेश गरेका जोशीले बताए तर डिमाण्ड आएपनि सेवा शुल्क नातोकिंदा स्वीकृति दिन नसकिएको उनले बताए । पूर्व स्वीकृतिसँगै म्यानपावर कम्पनीले कामदार माग गर्दै विज्ञापन गर्ने तयारी गरेको छ। विज्ञापन प्रकाशन पश्च्यात कामदार छनौट गरेर, भिसा लगायतका प्रक्रिया पूरा गर्दै अन्तिम श्रम स्वीकृतिका लागि आवेदन दिनुपर्नेछ ।
– साझा सवालबाट
भारतले चन्द्र अभियानअन्तर्गत पठाएको चन्द्रयान–२ मंगलबार चन्द्रमाको कक्षमा प्रवेश गरेको छ ।
रवि लामिछाने रिहा भएपछि उनलाई काधमा बोकेर घर लान्छौ, सत्यको जीत हुन्छ – नायक रमेश उप्रेती